Nagu saabsan - Changzhou Sdpac Co., Ltd.
Changzhou Sdpac Co., Ltd. wuxuu ku yaal C5, HUTANG sayniska iyo Teknolojiyada Warshadaha, Wadada Bariga Guangdian, Magaalada Changzhou, oo leh aag ku dhow 10000 m2.
Aragtida shirkaddu waa "inay ku dadaasho inay dhisto sumcad caan ah oo caag ah" waxayna sameysay nidaam dhaqan oo u gaar ah
"Eeg mustaqbalka, kaliya samee balka"waa falsafadeena ganacsiga.
Changzhou SDPAC Co., Ltd. waxay abuuri doontaa taxane taxane ah oo tayo sare leh oo balaastig ah oo Mareykan ah si loo daboolo baahida macaamiisha ugu sareysa. Horumarinta alaabada ceeriin iyo alaabta ceyriinka ah ee suuqa gudaha, qiimaha baakadaha waa la horumarin karaa. Baakadaha baakaduhu waxay door muhiim ah ka ciyaaraan kordhinta qiimaha badeecadaha dibadda ku soo kordhay. Astaan ​​ahaan baakadaha-dhamaadka sare, baakadaha balaastigga ah ayaa si joogto ah u beddelaya qaabka baakadaha xirmooyinka ee suuqa. Waxaan si adag u aaminsanahay in mustaqbalka xirmooyinka balaastiggu uu yahay hal-abuurnimo firfircoon, oo si buuxda uga tarjumeysa xilligii wax soo saarka shaqsiga ahaa.
Shirkadeena ayaa had iyo jeer gelisay ilaalinta deegaanka meel muhiim ah istiraatiijiyadda horumarinta ganacsiga. Iyadoo siineysa macaamiisha wax soo saar iyo adeegyo tayo sare leh, shirkadda waxaa ka go'an ilaalinta deegaanka dabiiciga ah si loo gaaro horumar waara. Waxaan isku dari doonaa maareynta deegaanka iyo maareynta shirkadaha, waxaanna si tartiib tartiib ah u dhisi doonnaa una hagaajin doonnaa abaabulka iyo habka howlgalka ee maareynta deegaanka. Daryeelka dhulka aan ku nool nahay, yareynta qiiqa wasakhda keenaya iyo keydinta tamarta ayaa ah yoolalka aan waligeen leenahay.
2010 DEVELOP ROUND PAIL A SERIES & SERIES PAIL SARE
2011 HORUMARIN KU SAABSAN SERIES B silsilad
2012 HORUMAR DHAMMAAN QAADKA BAASASALKA
2013 HORUMAR QAADASHADA JOOJINTA DHIMAN
2014 SHAQAALAHA SHAQAALAHA HORMARINTA
2015 KHUDBADDA LIIDKA HIDAHA & GAMMA LID
2016 HORUMARIN KU SAABSAN XAALADAHA XARUNTA C
2017 HORUMARIN KU SAABSAN SERIES D silsilad
2018 HORUMARKA SASARADA KORONTADA KORONTADA
2019 HORUMAR DHAQAALAHA CARRUURTA & BILAASHKA BAASBIGA
2020 HORUMARIN CILMI QAYBTA